ESOGÜနှင့်Tülomsaşရထားလမ်းစနစ်ပရိုတိုကော | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကTulomsas ရထား Protocol ကိုအတူESOGÜလက်မှတ်ထိုး
04 / 06 / 2012 လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနှင့်တူရကီစက်ခေါင်းမော်တော်စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်အတူEskişehir Osmangazi တက္ကသိုလ် (Eskisehir Osmangazi) ပညာရေးနှင့် R & D အပါအဝင်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူရထားလမ်းစနစ်များအကြား (TÜLOMSAŞ) အားလုံးကိစ္စရပ်များအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရည်ရွယ်တစ် protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သင်တန်းဆရာနှင့်အထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုဖန်တီးရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့ခွင့်ပြုစနစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပြည်ပမှာအပေါ်မှီခိုမှုကိုလျှော့ချဖို့ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်လိုအပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်တင်ဆောင်လာသောအားဖြင့် R & D လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်ကြေညာချက်နှင့်အတူတစ် protocol ကို, ကဏ္ဍလိုအပ်ကြောင်းသုတေသီများ, esogüရထားလမ်းအင်ဂျင်နီယာအလုပ်လုပ်သောသူတက္ကသိုလ်များဦးဆောင် အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်က memory နဲ့ setting အားဖြင့်ကဏ္ဍ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်နည်းလမ်းများ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စံနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာ၏ဖန်တီးမှုများအတွက်ဘုံမူဝါဒများ, အတူတကွပူးပေါင်းမှစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာအတွင်း R & D စနစ်နှင့် ပတ်သက်. ကဏ္ဍရဲ့ဆန္ဒကိုတွေ့ဆုံ, ရထားလမ်းအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်လုပ်ကိုင်ဖို့, အဲဒီကိုထောက်ပံ့ပေးအကြား အရာကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောတွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခချုပ်ESOGÜ၏ညီလာခံခန်းမထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်စကားပြောသော ဒေါက်တာ Hasan Gonen, Eskişehirအစာရှောင်ရထားနှင့်အစာရှောင်ရထားများအတွက် bridgehead ဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းအနာဂတ်တွင်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုအကြီးအပံ့ပိုးမှုများကိုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောငွေစုပေးသွားမှာပါနှင့်ပါမောက္ခဖော်ပြ ဒေါက်တာ Hasan Gonen, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစေရန်အလို့ငှာနှင့်အခြားရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လမ်းရထား Eskisehir အတွက် TULOMSAS, နည်းပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသူတို့ကဒီ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ပရိုတိုကော TULOMSAS မှ General Manager Hayri Avci ရထားလမ်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်ခေါင်း, လှည်း, ထောက်ခံမှုရတဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌သူတို့ထိုကဲ့သို့သောပေါ်လာတာဟာအရင်အဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ R & D ကို protocol ကိုအဖြစ်ကဏ္ဍများအတွက်လိုအပ်သည့်ထောက်ခံမှုသတင်းအချက်အလက်ပေးအရေးကြီးသည်ဟုသူကဆိုသည်။
Hayri Avci 100 အဆိုပါရထားလမ်းကားကိုအများကြီးရည်ရွယ်တဲ့ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာဝေစုထဲကနေတတ်နိုင်သမျှရှာတွေ့Eskişehirဘီလီယံကိုယူရိုထုတ်လုပ်စင်တာကြောင်းရထားလမ်းကားများပေးအပ်နှစ်ခုအဖွဲ့အစည်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သူဟုဆိုသည်။
အဆိုပါ Altai အကြံပေးအဖွဲ့ကနေesogüထောက်ခံမှု
ရထားလမ်းစနစ်များကဏ္ဍနှင့် 2020 Vision ၏အစည်းအဝေးTÜLOMSASကျင်းပခဲ့သည်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး protocol ကိုရထားလမ်းစနစ်များ၏လယ်ပြင်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်
ESOGÜနှင့်ကျင်းပ Tulomsas ရထားနှင့်ရထားစနစ် Tools များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Rail Systems Club ဖွင့်ပွဲတွင် Altepe သည်çözümသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်
Karabükတက္ကသိုလ်ရထားစနစ်အင်ဂျင်နီယာကလပ် ၁။ မီးရထားစနစ် Panel Karab
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ယူကရိန်းရထားလမ်း 27 ။ အဆင့်